Baahin: Isniin, May 02, Weriye C/raxmaan Xuseen Gaardi ~ Daljir ~ Garowe. Dagaalkii Garbahaarey ee u dhexeeyey Al-shabaab & ciidanka dawlada federaalka oo istaagay; khasaare lixaad leh oo ka dhashay; Isaaq Mursal, xog-hayaha gaashaandhiga ee Ahlu-sunna ayaan waraysanay … Hoggaamiyihii ururka Al-qaacida Sh. Usaama Bin Laden oo la dilay; warbixin ku saabsan sooyaalka taariikheed ee Sh. Usaaama … Dawlada federaalka oo faragelin siyaasadeed ka wada gobollada Puntland; Garaad C/llahi Cali Ciid oo hoga-tusaaleeyey sooyaalka Puntland … Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo tababar ku saabsan xiriirka lamaanaha uu uga furmay Garowe … – Radio Daljir